Blessed Thistle (ဘလပ်စ် တစ်စတယ်) - Hello Sayarwon
Blessed Thistle (ဘလပ်စ် တစ်စတယ်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Blessed Thistle (ဘလပ်စ် တစ်စတယ်)
Blessed Thistle (ဘလပ်စ် တစ်စတယ်) ကဘာလဲ။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Blessed thistle ဟာ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ပန်းပွင့်တဲ့ အပေါ်ပိုင်းတွေ။ အရွက်တွေနဲ့ ပင်စည် အပေါ်ပိုင်းတွေကို ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ယခုအခါ Blessed thistle ကို အစာခြေရည်တွေနဲ့ တံတွေးတွေ ပိုမိုထွက်စေဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပြီး လက်ဖက်ရည်အနေနဲ့ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းနဲ့ အစာမကြေခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို ဆီးပိုထွက်စေဖို့ ဆီးဆေးအနေနဲ့ လည်းအသုံးပြုကြပြီး နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ နို့ပိုထွက်စေဖို့လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
လူအချို့ဟာ Blessed thistle ကို ဂွမ်းနဲ့စိမ်ပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာနဲ့ ရိုးရိုးအနာတွေကို ပျောက်ကင်းစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Blessed thistle ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Blessed thistle ဟာ အစာစားချင်စိတ်နဲ့ အစာခြေရည်ကို ပိုမိထွက်စေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိကို ဖေါ်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချို့က သူဟာ ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Blessed thistle ကို အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့နဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်။
သူ့ကို အသုံးပြုစဉ်မှာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ contact dermatitis တွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆေးကို ရပ်သင့်ပါတယ်။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
သူ့ရဲ့ ယားယံစေတဲ့ အစွမ်းကြောင့် Blessed thistle ကို အစာအိမ်အနာနဲ့ အူရောင်ရောဂါဖြစ်တဲ့ Chron’s disease တို့မှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
Blessed thistle ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာလည်း အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ နို့တိုက်ခြင်းကို အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ အာနိသင်ကိ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ လေ့လာမှုလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
• ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်း
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Antacid (H2 blockers ) တွေဟာ အစာခြေ အက်ဆစ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ Blessed thistle ကတော့ အစာခြေရည်တွေကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ antacid တွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Blessed thistle ဟာ AST, ALT, Alkaline Phosphatase အစရှိတဲ့ အသည်းအင်ဇိုင်းတွေကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Blessed thistle ကို သုံးရမယ့် အညွှန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှု လုပ်ထားတာမရှိပါဘူး။ တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ Blessed thistle ကို နေ့စဉ် ၄ ဂရမ်ကနေ ၆ ဂရမ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်နေ့တည်း အများကြီး (၅ ဂရမ်ကနေ ၆ ဂရမ်) အထိ အသုံးပြုခြင်းဟာ အန်စေနိုင်ပါတယ်။
Blessed thistle ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘလပ်စ် တစ်စတယ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Blessed thistle ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. page 93.
Blessed Thristle. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 94 blessed%20thistle.aspx?activeingredientid=94&activeingredientname=blessed%20thistle.